Uru nke UV-C Disinfection Systems dị ọtụtụ, gụnyere: Ọ bara uru maka ụdị micro-organism niile, gụnyere nje bacteria, nje, fungi na protozoa Ọ dịghị ngwaahịa disinfection (DBPs) guzobere obere ego na arụmọrụ na-arụ ọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ ma debe Nchekwa na gburugburu ebe obibi f ...
Ihe 222nm UV Light dị mma?
E nwere ọtụtụ ntụgharị dịgasị iche iche n'ime ụdịdị dị iche iche nke UV, nke ọ bụla nwere ntinye nke ya na profaịlụ nchekwa ha. Ogologo oge dị elu dịka UVA na UVB nwere ike ịdị ize ndụ na ahụike gị, mana UVC 222nm dị mma maka oghere ime ụlọ ...
Ikike nke 222nm Ultraviolet Light on Disinfecting SARS-CoV-2 Mkpa Mmeri
Nnyocha a na-enyocha ndị ọgbọ bipụtara na American Journal of Infection Control nyochara ịdị irè nke Far-UV 222 nm megide SARS-CoV-2 (nje nke na-akpata COVID-19) n'elu. N'ime ọmụmụ ihe a, obere ụzọ Far-UV 222 nm nke 3 mJ / cm2 mere ka mbelata 99.7% na SARS-CoV-2 "nwere ike ...
Lụ ọgụ-19: Iji ULTRAVIOLET ÌH TO DECONTAMINATE CT SCANNERS
Nyocha CT dị oké mkpa iji chọpụta ọrịa ndị na-egbu ume gụnyere COVID-19, mana ikpochapu igwe ndị ahụ n'etiti iji ha na-ewe oge. Otu ìgwè nke ndị nchọpụta nwere ike ịdakwasị na ngwọta. Vanessa Wasta na Sarah Tarney / Bipụtara Dec 8 N'ime mgbalị iji mee ka ọrụ ntanetị dị ike, nyocha ...
Ofdị UV A na-akpọ Far-UVC dị mma iji gburugburu mmadụ ma gbuo> 99.9% nke Airborne Coronaviruses: Ọmụmụ
June 25, 2020 - Ihe karịrị 99.9% nke coronaviruses nke oge a na-egbu mmiri na-egbu mgbe ekpughere ha n'ogologo ọkụ nke ultraviolet nke dị mma iji ya mee ihe gbasara ụmụ mmadụ, nchọpụta ọhụrụ na Mahadum Columbia University Irving Medical Center achọtala. “Dabere na nsonaazụ anyị, con ...
Nwere ike UV Light-egbu New Coronavirus?
Ultraviolet (UV) ìhè bụ ụdị radieshon. O nwere ike karịa ebili mmiri redio ma ọ bụ ìhè a na-ahụ anya mana obere ume karịa ụzarị ọkụ ma ọ bụ ụzarị gamma. Enwere ike ikpughere gị site na ọkụ UV site na ìhè anyanwụ ma ọ bụ site na ebe mmadụ mere dị ka akwa tanning. Ejirila UV ọkụ mee ihe iji gbuo nje dị ka ...
Kedu ihe teknụzụ UV na UV-C
Gịnị bụ UV? A na-akpọkarị ya 'ọkụ' nke ultraviolet, mana UV bụ ụdị radieshon electromagnetic nke nwere ogologo dị mkpụmkpụ karịa ọkụ a na-ahụ anya na ogologo karịa ụzarị ọkụ X. UV radieshon dabara ụzọ atọ dabere na ntụgharị ya: UVA, UVB na UVC. Obere mkpụkọ ọsọ, mor ...
Mahadum Kobe na Ushio gosipụtara 222 nm Far UV-C Light na-ebelata ọnụọgụ nje na-akpata enweghị mmebi na anụ ahụ mmadụ
Ultraviolet radieshon C (UVC) a kọwara dị ka 100 - 280 nm wavelengths UV. UVC sitere na anyanwụ UV enweghị ike iru elu ụwa, n'ihi na UV a na-etinye oyi akwa ozone. Ot germicidal UVC light (254nm wavelength) nwere ike iji disinfect unoccupied oghere ndị dị ka ...
Gịnị bụ UV-C Na-eweta Ike nke Ìhè Ime Anyanwụ
Kedu ihe UV-C Na-eweta Ike nke Igwe Ọkụ n'ime Thedị UV Sdị UV-A, UV-B, na UV-C bụcha akụkụ nke ụdị ọkụ ọkụ ultraviolet. UV-A na-ebute tanning akpụkpọ ma jiri ya na ọgwụ iji gwọọ ụfọdụ nsogbu anụahụ. UV-B nwere nnukwu ike ịbanye na r ...
UV ọkụ na Oriọna: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, na Coronavirus
N'iburu ntiwapụ nke ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) nke ọrịa SARS-CoV-2 na-akpata coronavirus, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnwe mmasị n'ịzụrụ oriọna ultraviolet-C (UVC) iji kpochapụ ikuku n'ụlọ ma ọ bụ oghere ndị yiri ya. FDA na-enye azịza nye ajụjụ ndị ahịa banyere ...
6 Uru Ejiri UV Light maka Disinfection
Ejirila usoro ọdịnala ọdịnala kemgbe ọtụtụ narị afọ - mana ha zuru oke? Nke bụ eziokwu bụ na ọbụlagodi ihe kachasị sie ike na mmiri ọkụ, ịcha ọcha, na ọgwụ nje nwere ike ịhapụ nje na nje. N’ọnọdụ kasị njọ, ihe ndị ahụ nwere ike ịkpata ọrịa ma ọ bụ ọbụna ọnwụ. ...
Nje bacteria na Nje Virus na UVC light nwere ike igbu ha?
Gini bu nje na nje? Nje virus na nje nwere ike ịgafe n’ikuku, na-ebute ọrịa ndị na-aka njọ. Ha na-abanye n'ikuku n'ụzọ dị mfe. Mgbe mmadụ hụrụ uzere ma ọ bụ ụkwara, obere mmiri ma ọ bụ ụmụ irighiri mmiri mucous jupụtara na nje ma ọ bụ nje bacteria na-agbasasị n'ikuku ma ọ bụ na-ejedebe n'aka ebe ha gbasara o ...